Oovimba beGalaxy Note 9 bangaphezulu kwezo zeGalaxy S9 | I-Androidsis
Ukubhuka kweGalaxy Note 9 kudlula kwiGalaxy S9
Nge-9 ka-Agasti, amaKorea avela eSamsung azisa ngokusesikweni i-Galaxy Note 9 entsha, i-terminal efikelela kwintengiso ukuzama ukuphucula iziphumo ezibalaseleyo esele zinikezelwe ngumanduleli wakhe, bekhetha uyilo olufanayo, ubuncinci ubuso ngobuso ngaphandle , ukusukela umahluko ophambili ufumaneka ngaphakathi.
Ukusukela nge-9 ka-Agasti ophelileyo, inkampani iyasivumela ukuba sigcine i-Galaxy Note 9, i-terminal ethi nangona uninzi lucinga ukuba ayimelanga utshintsho olukhulu kwisizukulwana esidlulileyo, kunjalo, kwaye kufuneka sibone Inani lokubhukisha lonyukile, lidlula kwaleyo yeGalaxy S9.
Ngokwabaqhubi abaliqela baseKorea, Oovimba beGalaxy Note 9 baphakathi kwama-30 nama-50% aphezulu kunalawo eGPS S9Isiphelo esingakhange sifumane mpendulo ilungileyo evela kubasebenzisi, ngenxa yokuphuculwa okuncinci, kungabalulekanga kangako ukuba sikufumene xa kuthelekiswa neGPS S8. Kwaye xa ndibhekisa kuphuculo, ndithetha ukuphuculwa okutsala umdla womsebenzisi, hayi abo kuthi baqhubeke bebhala okanye bafunde ngetekhnoloji.
I-Galaxy Note 9 sisiphelo sendlela, kwaye uninzi lwabasebenzisi ababelinde ukuvuselelwa kwale modeli minyaka le, kubonakala ngathi beqinisekile ngokupheleleyo. Mhlawumbi, esinye sezizathu eziphambili Ukwenza utshintsho silufumana kubungakanani bebhetri, ubungakanani obonyuke ukuya kwi-4.000 mAh, ukusuka kwi-3.300 yemodeli yangaphambili.
Ukongeza, iimodeli ezintsha, nazo sivumele ukugcina kwi-512 GB yedatha, isithuba esinokwandisa ukuya kwenye i-512 GB, ngamanye amaxesha isinika amandla amaninzi kunelaptops ezininzi kwintengiso. Enye into abasebenzisi beNqaku abanokuthi bayithathele ingqalelo xa behlaziya inqaku labo elidala yiS S ngeBluetooth, ipeni enevithamini S esivumela ukulawula ukudlalwa kweevidiyo / iifoto / izilayidi kude, ukongeza ekusivumeleni ukuba siyisebenzise njengolawulo olukude ukuthatha imifanekiso okanye ukuqala ukurekhoda iividiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Ukubhuka kweGalaxy Note 9 kudlula kwiGalaxy S9
Iikati zaseSailor yinto entsha evela kwisitudiyo somdlalo weMadrid esibizwa ngokuba yiPlatonic Games
Uyikhuphela njani i-gReader, enye yezona zifundo zibalaseleyo ze-RSS ethe yanyamalala kwiVenkile yeGoogle Play